कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: आत्म सन्तुष्टी मिल्छ .... रत्न सम्भव शाक्य, डल्लु काठमाडौं
आत्म सन्तुष्टी मिल्छ .... रत्न सम्भव शाक्य, डल्लु काठमाडौं
गायन कला आवाज मात्र होईन, मातृभाषा कला संस्कृती र संस्कारको जगेर्ना पनि हो । चर्चित गायक रत्न सम्भव शाक्यसंगको छोटा संवाद
—प्रस्तोता पवन जोशी
—भरखरै पेज थ्री अवार्ड ११४२ को सांगीतिक प्रतियोगितामा “छ वःगु खनेवं मन जिगु चं चं धाःथें च्वं” गीतबाट उत्कृष्ट आधुनिक युगलगीत नोमिनेसनमा परेको छु, जुन गीतलाई मैले र प्रतिमा बज्राचार्यले गाएको थिएँ । त्यहि गीतलाई म्युजिक भिडियो निर्माण गर्ने तरखरमा छु ।
२.कति वर्ष भयो यहाँले गायन कला अंगाल्नु भएको ?
—मैले ६ वर्ष भयो गाउन थालेको मेरो पहिलो गीत हो “गनवने त्यना मय्जु गाच्व ब्वयकाः” अमृतरत्न शाक्यको रचना, सुरनेमान शाक्यको संगीतमा मैले गाएको थिएँ ।
३.गायन कला क्षेत्रमा लागेर के हासिल गर्नु भयो ?
—मुख्यत आत्मा सन्तुष्टीनै ठूलो उपलब्धी हो । सानै देखिन गायन विधा मनपर्छ त्यसैलाई पुरा गर्दै छु ।
४.धेरै संघ संस्थाले अवार्ड कार्यक्रम गर्दै छन्, तपाईंको धारणा ?
—अवार्ड कार्यक्रम धेरै राम्रो हो । यसले गर्दा कलाकर्मीहरुलाई प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने मौका साथ हौसला प्रदान गरेको छ । छनोट हाम्रो होइन राम्रो छान्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा ।
५.गायन विधामा हुनुपर्ने ज्ञान ?
—सुर ताल र रसको ज्ञान हुनु जरुरी छ ।
६.पैसा खर्च गर्न सके गायक गायीका बनिन्छ रे यस्मा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ?
पैसाले गीत गायीने हैन प्रतिभाले गाउँछ संगीत ज्ञान प्राप्त गरे पछि मात्र गायक गायीका हुने सौभाग्य मिल्छ ।
७.म्युजिक भिडियो किन निर्माण गरिन्छ ?
—वर्तमान समयको माग हो । भिडियोको जमाना आयो, बाध्यताले आफ्नो प्रतिभा दर्शकसम्म पु¥याउन भिडियो निर्माण ग¥यो ।
८.तपाईंको पहिलो गीत गाच्व ब्वयकाः भिडियो प्रसारण पश्चात कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भयो ?
—म्युजिक भिडियो प्रसारण पश्चात धेरै दर्शकहरुले राम्रो गीत हेर्न पायो भन्दै स्यावासी दिनु भयो जीवनमै ठुलो काम गरेको महसुस भयो । अवको भिडियो पनि नौला स्वादमा निर्माण गर्ने योजना छ ।
९.म्युजिक भिडियो निर्माणको झन आर्थिक भार परेन ?
—आर्थिक लाभ मात्र सबै होईन, लोपहुन लागेको मातृभाषाको जगेर्णा पनि एक प्रकारको भाषिक आन्दोलन हो । समयमा बचाउन सकेन भने जातिय अस्तित्वनै समाप्त हुन्छ । त्यसैको निम्ति मातृभाषा गीत गाउंछु त्यसैमा मन हलुका र आनन्द प्राप्ति हुन्छ ।